Chris Gayle Profile, News, Teams & Stats
42y and 04m
Christopher Henry Gayle isaJamaican cricketer who plays international cricket for the West Indies. Gayle captained the West Indies Test side from 2007 to 2010. Considered as one of the greatest batsmen ever in Twenty20 cricket, Gayle has set numerous records across all three formats of the game.
गेल २ बर्षपछि राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गर्दै
वेष्ट इन्डिज क्रिकेटर क्रिस गेल दुई बर्षपछि राष्ट्रिय टिममा फर्किने भएका छन । श्रीलंकाविरुद्धको टी २० सिरिजका लागि गेललाई वेष्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले टिममा बोलाएको छ । ४१ बर्षे गेललाई आगामी टी २० विश्वकपलाई लक्षित गरेर टिममा बोलाएको हो । हाल पाकिस्तान सुुपर लिग खेलिरहेका गेल राष्ट्रिय टिममा बोलाएपछि स्वदेश फर्किने भएका छन । श्रीलंकासँगको […]
आसन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि वेष्ट इन्डिजका विस्फोटक खेलाडी क्रिस गेल नेपाल आउने पक्का भएको छ । गेललाई पोखरा राइनोजले इपीएलका लागि नेपाल ल्याउने लागेको हो । लामो समयको प्रयासपछि गेलले इपीएल खेल्न राजी भएको पोखरा राइनोजले जनाएको छ । उनी पोखराको आइकोनीक खेलाडी समेत रहेका छन । इपीएलको सफलताले गर्दा गेलले नेपालमा खेल्न राजी […]